Jubbaland oo ku war-gelisay ciidamada in ay al-shabaab ka sifeeyaan deeganada ku dhow Afmadow – Radio Daljir
Agoosto 11, 2013 2:44 b 0
Af-madow, Aug 11, 2013 – Maamulka Jubbaland ee degmada Af-madow ayaa ku baaqay diyaar garow iyo dagaal ka dhan ah kooxda Al-shabaab ee? ku sugan deeganada ku dhow magaalada iyo dhulka miyiga ah, kuwaasi oo inta badan weeraro ku soo qaada Af-madow.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo maalmihii tegey ku sugnaa halkaasi ayaa waxaa uu shir la qaatay saraakiisha ciidanka Jubbaland iyo kuwa Kenya, iyagoo ka wadda hadlay arimo badan oo khuseeya xaalada amaanka iyo difaaca gobolka.
Axmed Madoobe wuxuu ugu baaqay ciidamada Jubbaland in ay heegan sare u galaan sidii ay u difaaci lahaayeeen magaalada Afmadow iyo deeganada ku dhow dhow ee ay Al-shabaab joogaan, in kastoo aan la isku raacin wakhti rasmi ah oo al-shabaab laga saarayo deegaanka.
Cabdixakiin cumar Xaaji gudoomiyaha Jubbaland ee Af-madow oo maanta saxaafada gudaha dalka la hadlay ayaa sii xoojiyey arintaasi isagoo ugu baaqay ciidanka Jubbaland in ay galaan heegan sare, wuxuu sheegay in mar kasta ay diyaar u yihiin dagaal ka dhan ah shabaab.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa haatan dib ugu noqday magaalada Kismaayo kadib labba maalmood oo joogay Af-madow, qorshihii ugu weynaa ee Axmed Madoobe u tegey Kismaayo ayaa lagu sheegay arimaha amaanka iyo awooda ciidanka.